Kugadzirisa Maitiro Akashata eCOVID-19 pane Tourism Izvozvi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » Kugadzirisa Maitiro Akashata eCOVID-19 pane Tourism Izvozvi
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now
Jamaica Gurukota Rezvekushanya, Hon. Edmund Bartlett, aita hurukuro kuXXV Inter-American Congress yeMakurukota neVakuru veZviremera zveHurumende nhasi, Gumiguru 6, 2021. Iyi mharidzo yakaitwa sechikamu chePlenary Session 3: Maitiro ekuderedza zvakashata zve COVID-19 pa Tourism: Kukurudzira uye rutsigiro rwemakambani ane chekuita nekushanya.
Jamaica yakambozivisa nezvenzira dzehurumende pamwe nekuedza kudzikisira kukanganiswa kwedenda iri munharaunda yekushanya.
Hurumende yeJamaican yakaisawo pamberi rubatsiro kumabhizimusi madiki, madiki uye epakati.
Kupindira kweGurukota pachiitiko ichi kwakanangana nekukosha kwemishonga yekudzoreredza hupfumi hwepasirese uye kushanya.
Yakapihwa pano ndeekutaura kwaGurukota Bartlett:
Maita basa, Madam Sachigaro.
Nhumwa yeJamaica, mumisangano yakapfuura yeOAS neCITUR, yazivisa nezvehurongwa hwehurumende pamwe nekuedza kudzikisira kukanganiswa kwedenda iri chikamu chekushanya. Izvi zvave kuburikidza nematanho epfupi nerefu kwenguva refu senge nzira yekushanya inoshingirira kusimudzira zviitiko zvekushanya kune chikamu pamwe neJ $ 25 bhiriyoni yekukurudzira hupfumi hwakawanda, nekupihwa kweGivano Grant kubatsira mabhizinesi anoshanda muchikamu ichi. yakakanganiswa neCOVID-19. Hurumende yeJamaican yakaisawo pamberi rubatsiro kumabhizinesi madiki, madiki nepakati, ichiona kuti mabhizinesi aya ndiwo musana wehupfumi hweJamaican.
Kupindira kwangu pachiitiko ichi kunotarisa pane chimwe chinhu chakakosha kwazvo pakugadzirisa hupfumi hwepasirese nekushanya-vaccines. Tinosimbisa kushevedzera uku, muna Chikumi gore rino, neVatungamiriri veInternational Monetary Fund (IMF), World Bank (WB), World Health Organisation (WHO) neWorld Trade Organisation (WTO) yekudyara US $ 50 bhiriyoni muvharingi yakaenzana. kugovera uko kunogona kuburitsa US $ 9 tiririyoni mukudzoka kweupfumi hwepasi rose na2025. Vamiriri vangu vanotenda nemoyo wese kuti "hakuzove nekugadziriswa kwakazara pasina kupera kwehutano hutano. Kuwana jekiseni chinhu chikuru kuzvose. ”
Zvinosuruvarisa, panguva ino mudenda, kusaenzana kwejekiseni kunoramba kuripo apo kunyangwe paine mishonga inodarika mabhiriyoni matanhatu yemajekiseni akagoverwa, mazhinji acho ari munyika dzinowana mari yakawanda asi nyika dzine hurombo dzine isingasviki 6% yevagari vevanhu vakabayiwa nhomba. Tinobvumirana kuti kubaiwa nhomba kwepasi rose kwakaringana hakusi kungoita zvehunhu chete asiwo kunopa pfungwa yezvehupfumi kwenguva refu. Zvichipa hunhu hwedenda, uye COVID-1, kunyanya, hakugone kuve nekusimudzira kana kuenderera kwekushanya kwepasirese uko nyika dzinotambira mari dzakasara kumashure. Aya ndiwo maratidziro eiyo 19 Agenda ye Sustainable Development - kuti tirege kukanganwa. Panyaya iyi, tinogamuchira uye tinotenda zvipo zvejekiseni kubva kune vatinoshanda navo uye tinosimbisa kuti idzi dzinofanirwa kunge dziri panguva yakakodzera uye dzinoshanda zvipo, tichifunga nezvekupera kwemazuva emishonga.
Sekureva kwesangano reUN World Tourism Organisation (UNWTO) kutanga kwesvondo rino, kufambiswa kwekudzivirira hutachiwana pasi rose kwaive chimwe chezviratidzo zvekudzoka kwakanakidzwa nekushanyirwa kwenyika dzese munaJune naChikunguru 2021. Shanduro ichangoburwa yeUNWTO World Tourism Barometer inoratidza kuti inofungidzirwa kuti makumi mashanu nemashanu. mamirioni evashanyi akayambuka miganhu yepasi rose muna Chikunguru 54, pasi 2021% kubva Chikunguru 67, asi zvakadaro mhedzisiro yakasimba kubva muna Kubvumbi 2019.
Vamiriri vangu vanofara kuziva kuti dunhu redu reAmerica rakaona kuderera kudiki kune vashanyi vekunze vanosvika 68% kupfuura mamwe matunhu, neCaribbean ichiratidza kugona kwakanyanya pakati penzvimbo dzenyika. Idzi inhau dzinokurudzira kuvhenekera nzira yedu pamberi pekuenderera mberi nekupora. Sokutaura kwakaita Director-General Ikonyo-Iweala veWorld Trade Organisation, "kudzoreredza hupfumi pamwe nekutengeserana kunogona kuwanikwa chete nemutemo unoona nekukurumidza kuwana mishonga yekudzivirira."
IWHO yakatsigira matanho akakosha ekuzadzisa 40% yekudzivirira kwepasirese naDecember 2021 uye 70% munaJune 2022 kupedza denda iri. Tine zvishandiso zvinodiwa, uye maziso edu anofanira kunge ari pamubayiro wekupona uye kubudirira kweichi uye chizvarwa chinotevera.
Sezvo isu takatarisana nekusaenzana kugoverwa muzvirwere pakati penyika dzakapfuma dzakasimukira uye nyika dzine mari shoma dzeGlobal South, takatarisana nedambudziko rekuwedzera rekuzeza jekiseni pakati pevamwe vedu vagari. Vanhu vanowanzo kutya mvura isina kurovedzwa, kunyanya zvine chekuita nehutano hwavo, uye zvisizvo zvinowedzera kutya uku.
MuJamaica, ine huwandu hwevanhu vangangoita mamirioni matatu, takaendesa 3 doses, iine chete 787,602% yevagari vakanyorwa sevakabaya zvakakwana. Hurumende yakashandisa mameseji ekugadzira kuzivisa vagari uye kukurudzira kubaiwa. Kubatana kweveruzhinji-akazvimirira kwakasimbiswa nezvibvumirano zvakanamirwa nemakambani kuti vabatsire nemishonga yekudzivirira majekiseni munzvimbo dzinowanzotengeswa dzakadai semashopamaketi nenzvimbo dzekutengesa kuitira kuti vawane majekiseni. Tine hanya nevasina kusimba pakati pedu uye nezvenyaya iyi, nhomba dzekudzivirira nhomba dzakatangwa kuti dzisvike kumaruwa nekudzimba dzevarombo, vakweguru nevanhu vakaremara vanogona kunge vasingakwanise kufamba zvirinyore kubayiwa nhomba.
Kunyanya muindasitiri yezvekushanya, Tourism Vaccination Taskforce yakaumbwa seimwe ratidziro yekudyidzana pakati pevoruzhinji (Ministry of Tourism) nevemasangano akazvimirira (Private Sector Vaccine Initiative neJamaica Hotel neVashanyi Association) kufambisa yekuzvidira COVID-19 kubaiwa kwevashandi vese vekushanya vanosvika 170,000. Ichi chinangwa chekuda; zvisinei, tinoramba tisingatyi sezvo mumazuva matatu ekutanga echirongwa, vashandi vanopfuura 2000 vakabaiwa jekiseni.
Vamiriri vangu vanoziva nezve basa rakabatwa ne "denda rezvematongerwo enyika" iro rinogona kutitadzisa kuita kwedu kupora. Panyaya iyi, kubatana kwepasi rose pamwe nekudyidzana chinhu chakakosha kuona kuti pasi rose mishonga yakachengeteka uye inoshanda kuitira kuti isasarure zvisina kufanira inoculation uye kufamba. Ini ndinoshuvira kudzokorora iyo poindi pane rusarura. Denda rakaratidza uye rakawedzera kusaenzana kuripo mukati nepakati penyika. Mitemo yedu nezvirongwa zvinofanirwa kuve zvekuchengetedza hupenyu nehupenyu hwekuvandudza hupenyu uye kusimudzira kusimudzira.
Tourism sekushambadzira mumasevhisi yakakosha zvakanyanya kune nyika dziri muCaribbean neAmerica nekuda kwechipo chayo kumabasa, GDP uye kugadzira shanduko yekunze. Sechikamu chevashandi-chakakura uye chakanyanya-vanhu, zviwanikwa nekurasikirwa kwedu zvinoratidzwa nyore nyore mukunyemwerera nekugomera kwevashandi vedu nevashanyi vedu. Kana isu tikaisa vanhu pamberi, tinogona kuwana nzira kuburikidza asi chete mukubatana pamwe nekubatana pamatanho ese.
Hurumende yeJamaica inodzokorora kuzvipira kwayo kumatunhu ehukama hwakawanda muOrganisheni yeAmerica States (OAS) uye nemamwe masangano epasirese. Hatife takawana mutemo wekudzivirira pasina kubatana. Hatife takaona kupora kunoshanda pasina kubatana. Ndinoshevedza nyika dzese dzinomiririrwa nhasi kuti dzitarise zvinoitika uye nemabatiro atingaite pamwe chete kuti tisimbe uye tigare takasimba.